Fitorahana bilaogy ho an'ny orinasa: fika vaovao ho an'ny alika taloha | Martech Zone
Fitorahana bilaogy ho an'ny orinasa: fika vaovao ho an'ny alika taloha
Alakamisy, Jolay 24, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tsy misy afaka miady hevitra amin'ny fomba feno fanjakazakan'ny bilaogy amin'ny lazany ary, amin'ny lafiny iray, ny milina fikarohana. Ny lazan'ny bilaogy dia avy amin'ity fomba fifandraisana vaovao ity izay nivoatra tao amin'ny tranonkala - misy olona kokoa, tsy voadio ary tena izy.
Technorati no manara-maso Bilaogy 112.8 tapitrisa amin'izao fotoana izao miaraka amina bilaogy an'arivony noforonina isan'ora. Misokatra fisoratana anarana loharano toa WordPress, Bilaogera, na Typepad sy Vox ataovy mora ny mitoraka bilaogy. Isaky ny orinasa, raha tsy ny sampan-draharahan'ny informatika rehetra dia hahita bilaogy olona iray farafaharatsiny ianao. Tsotra izany:
Soraty + Avoahy = Blog?
Toa mora, sa tsy izany? Izany no fomba nitondrana ireo mpanolo-tsaina ara-barotra rehefa miditra amin'ny fikambanana iray isika ary miresaka momba ny fanaovana bilaogy ho toy ny tetikady iray amin'ny marketing amin'ny ankapobeny. Miady hevitra momba ny fanaovana bilaogy ny orinasa toy ny entana ao amin'ny lisitra fanamarinana 2008. Anontanio ny orinasa iray raha mitoraka bilaogy izy ireo ary mahazo ilay "yup" voatery. Raha mbola tsy anontaniany dia anontanio izy ireo hoe inona ny sehatra tadiavin'izy ireo ary mamaly ireo "afaka" izy ireo.
Tsy mora izany
Raha tsotra be ny fanaovana bilaogy ataon'ny orinasa, maninona no mitotongana ny isan'ny bilaogy? Misy antony vitsivitsy:
Tsy mahasarika ny mpamaky ny resaka mavesatra.
Ny bilaogy fandraharahana dia mivadika ho fanambarana an-gazety miverina.
Ireo lohahevitra dia tsy miteraka fanehoan-kevitra na famerenana.
Tsy manana ny maha izy azy sy ny fitarihana eritreritra ireo lahatsoratra ireo.
Raha fintinina, ny antony mahatonga ny tsy fahombiazan'ny bilaogin'ny orinasa dia satria ny orinasa manolo ny fisoratana anarana bilaogy ho an'ny rafi-pitantanana atiny.
Mila fanampiana ny orinasa!
Misy lakile roa hahombiazana amin'ny fanaovana bilaogy izay tsy raharahan'ny orinasa mihitsy:
Sehatra iray manohana ny paikady.
Izay tovolahy IT rehetra manana fahatsapana ondrama dia afaka manipy WordPress amin'ny mpizara ary manome fidirana amin'ny CEO. Ity dia fomba azo antoka hiantohana ny androm-piainan'ny bilaoginao mandritra ny fotoana fohy. Mitovy amin'ny fivoahana sy fananganana orinasa fikarakarana bozaka izany satria hitanao ny fomba hanombohana ny bozaka.
Ny fahazoana ny fahefana sy ny valin'ny motera fikarohana dia mila fandinihana mafy ny orinasanao, ny mpifaninana aminy, ny fisiany tranonkala amin'izao fotoana izao sy ny toerana itiavanao azy.
Ny fametrahana sehatra fitorahana bilaogy izay mitarika ny bilaogera amin'ny alàlan'ny fizotry ny fandefasana, manampy ny mpanoratra tsy mahay teknika hamokatra atiny voavolavola, ary avy eo mandamina ho azy fa ny atiny ho an'ny valin'ny karoka farany ambony (notapahina tamin'ny fanadihadiana sy paikady teo aloha) no lakilen'ny fahombiazan'ny bilaogin'ny orinasa.
Tsy fahombiazana amin'ny alina ny fanaovana bilaogy. Ny valiny amin'ny famahanana bilaogy lehibe dia mitaky hery sy fanadihadiana ary fanatsarana hatrany. Miaraka amin'ny famahanam-bolongana fandraharahana, mamporisika ny fomba fanao amin'ny ekipa iray ihany koa aho, izay ahazoan'ny ekipa antoka fa mamono paikady sy fandaharam-potoana feno ny olona.
Ny atiny dia tsy entina na eken'ny Marketing. Raha misy a nefa matromatroka resaka hatao, matetika dia noho ny fanadiovana ny atin'ny zokilahy lahy.
Paikady + Soraty + Avoahy + Fanatsarana = Blog Business!
Tiako ny WordPress ary tsy hiova amin'ity bilaogy ity ity bilaogy ity. Na izany aza, tsy midika izany fa ny WordPress no vahaolana mety indrindra. Ao amin'ny efijery 'Mamorona New Post' ahy, tsy misy latsaky ny safidy 100… tag, sokajy, status, sombiny, trackbacks, fanehoan-kevitra, ping, fiarovana ny tenimiafina, saha manokana, sata apetraka, lahatsoratra ho avy…. misento Atsipazo eo imason'iza ity efijery ity ary somary mampatahotra!
Ny orinasanao dia tsy tokony hampianatra ny mpampiasa ny fomba fampiasana sehatra fitorahana bilaogy. Tokony ho afaka hiditra, hamoaka ary hamoaka marina ianao. Avelao ny fampiharana hanao ny ambiny!
Famaritana ny teny lakile
Ity misy ohatra iray amin'ny fisehoana mahafinaritra izay ho hitanao Compendium Blogware, fitaovana iray hanampiana ny mpanoratra hifantoka amin'ny teny fanalahidy sy andian-teny ao anatin'ny lahatsorany mba hananany hery mitrandraka ny motera fikarohana.
Raha manoratra teny vitsivitsy sy fehezanteny vitsivitsy na be loatra ianao dia hilatsaka ny isa azonao! Fitaovana kely mahavariana nosoratan'ny namana PJ Hinton izy io. Nasaina nanoratra ho an'ny mpamaky ny mpanoratra, saingy vitany izany ary hakitroky ny teny lakile lehibe miaraka amina fitaovana malina toa an'ity.
Fitaovana toy ny Compendium dia miaraka amina ekipa matihanina izay manampy anao amin'ny fananganana paikady, ary fampiharana iray izay manampy anao hampihatra mahomby amin'io paikady io. Ary tsy mila ny olona IT-nao hiditra ao akory! Raha tsy te-hahita ny bilaogin'ny orinasanao hidina fantsona ianao, mitadiava olona marina ary mahazoa fitaovana mety hamonoana azy.
Nahafinaritra ahy ny fitsidihan'ny kafe niaraka tamin'i Chris Baggott androany maraina (nandefa momba ny fikarohanaForrester momba ny fitorahana bilaogy koa izy.
famintinana is miasa - mifantoka atiny ary mitondra fifamoivoizana an-taonina ho an'ireo orinasa nisoratra anarana. Mirotsaka an-tsehatra ny mpamaky ary miverina izy ireo ary mitombo ny orinasa amin'ny valiny. Fotoana mampientanentana ho an'ny orinasa ary ny fironana Compendium dia mifanohitra tanteraka amin'ireo fironana izay efa hitan'i Forrester.
Fampahalalana feno: mpandray anjara amin'ny Compendium aho ary niara-niasa tamin'i Chris sy Ali tamin'ny andro voalohany. Ny Compendium dia teôria ary resaka fotsy fotsy taloha, fa i Chris sy ny ekipa kosa namadika an'io resaka io ho orinasa lehibe! Tsy teôria intsony io fa fampiharana manova bilaogy orinasa.
Tags: mitoraka bilaogy ho an'ny orinasabilaogy orinasaTechnorati
24 Jul 2008 amin'ny 12:26 PM
Lahatsoratra tsara, Doug.
Mety hilatsaka ny bilaogin'ny orinasa satria tsy nianatra ny fomba hanovana ireo mpamaky bilaogy ho mpanjifa ireo mpandray vao voalohany, olana iray mahazatra ny ankamaroan'ny tranonkala. Ankehitriny, manandrana fitaovana samihafa izy ireo.
Heveriko fa tsy mbola voasedra ny fanaovana bilaogy momba ny asa fandraharahana, farafaharatsiny tsy ny ankamaroan'ny orinasa mety hahomby amin'izany. Izany dia satria olana ny fanarahan-dalàna.
Ny olana amin'ny fanarahan-dalàna dia mitazona ny ankamaroan'ny orinasa tsara indrindra tsy hanao bilaogy. Ny orinasam-panjakana dia tokony hitandrina mba tsy hanao fanambarana mijery mialoha izay mety hitaona ny mpampiasa vola hividy ny tahiriny. Orinasa tsy miankina tarihan'ny fahitana (mety bilaogera tsara indrindra) dia tsy dodona ny hizara ny fomba fisainany amin'ireo mpifaninana aminy.
Ka iza no sisa? Orinasa mpivarotra sy antonony izay tsy ampy hamoahana besinimaro na hanana fahitana hanova an'izao tontolo izao. Mahatonga ireo bilaogy mankaleo feno fiantohana sy famoahana gazety ataon'ny orinasa izany.
Ny valiny? Eny, mbola miasa eo aho. Tsy mora ny fahazoana olona marina hitoraka bilaogy. Saingy raha vao manomboka izy ireo dia ireto misy torohevitra vitsivitsy hanamorana ny fanaovan'ireo bilaogera mpandraharaha hitandrina izany afo izany:
1) mitadiava fanampiana. Ny CEO dia mety ho ilay lehilahy tadiavinao amin'ny tsipika bilaogy, saingy mety tsy hataony laharam-pahamehana izany. Mametraha olon-kafa ho tompon'antoka amin'ny fahazoana antoka fa voasoratra sy nakarina ireo lahatsoratra.
2) mamorona tetiandro fanovana. Fantaro izay horesahinao mialoha, alefaso aoriany ny ekipa ara-dalàna ary avy eo asaivo miasa ny mpanoratra anao.
3) soraty izay ilain'ny mpanjifanao. Ny mankaleo dia ao an-tsain'ny mpamaky (na mason'ilay mijery, na zavatra hafa). Raha toa ny kendrena amin'ny fampidirana bilaogy tena izy ho an'ny orinasan'ny orinasa dia ho mora kokoa ny hanova ny mpamaky ho mpanjifa.
Misaotra hatrany amin'ny lahatsoratra tsara.
24 Jul 2008 amin'ny 12:35 PM
Misaotra Rick! Torohevitra miavaka. Misaotra anao nandany fotoana tamin'ity - mety ho whitepaper no ilaina, eh?
25 Jul 2008 amin'ny 6:26 PM
Lahatsoratra tsara, toy ny mahazatra.
Fa te-hanontany aho hoe, ahoana no nahatongavanao tamin'ny fahalalana ny fampiasa Compendium izay nasongadinao? Mpampiasa anao ve no mampiasa azy? Sa notohanan'ny Compendium ity lahatsoratra ity? Tena tonga toy ny dokambarotra izany.
Tandremo fa tsy miampanga anao aho, ary na dia karama-na-fandefasana aza dia mbola hihevitra anao fatratra aho, saingy te hahalala zavatra fotsiny aho…
25 Jul 2008 amin'ny 7:45 PM
Tsy misy ahiahy any! Nanolotra fampahafantarana vitsivitsy aho tamin'ny faran'ny paositra - nanampy tamin'ny famolavolana ny lohan'ny Compendium tany am-boalohany niaraka tamin'i Chris Baggott aho ary tompon'antoka amin'ny orinasa aho.
PJ Hinton dia mpamorona ao amin'ny Compendium ary (fifanandrifian-javatra izany) ary koa 'fiend' namana Ny amboaram-boanjo aiza no iarahako. Niresaka tamin'i PJ aho momba ny hevitra vitsivitsy hanampiana ny bilaogera hanoratra rehefa manoratra izy - ary PJ dia nanome ahy fahitana momba io fampiasa io izay mbola tsy navoaka.
Ali Sales dia nahita ilay hevitra ary heveriko fa mamiratra.
25 Jul 2008 amin'ny 6:35 PM
Doh! Noho ny antony tsy hitako ilay ampahany hoe "Fampahafantarana feno" dia novakiako tao amin'ny mpamaky RSS ahy izany ary tsy azoko izany. Miala tsiny amin'ny lahatsoratra teo aloha.
25 Jul 2008 amin'ny 7:46 PM
Tsy misy olana, Mike! Hisokatra miaraka aminao foana aho - ary mankasitraka ny fihantsiana anao. Heveriko fa 'adidiko' amin'ny maha-bilaogera ahy. Raha hanoratra ireo teny ireo aho dia tsara kokoa ny afaka manohana azy ireo!
31 Jul 2008 amin'ny 5:52 PM
Ny fitorahana bilaogy dia fomba mahafinaritra ahafahan'ny orinasa manatratra olona maro. Mamela ny orinasa haneho lafiny hafa amin'ny orinasany. Ho fanampin'izany, manampy amin'ny fampitomboana ny laharan'izy ireo amin'ny motera fikarohana. Satria ny bilaogy dia fomba tsara hifandraisana amin'ireo mpanjifanao sy hanitarana ny tamba-jotra sosialy dia mila mitandrina sy mifanaraka amin'ny bilaoginao ianao.